Karbaashka, talooyinka sida ku xusan waxqabadka iyo talooyinka loo isticmaalo | Fardaha Noti
La Fusta, noocyo iyo talooyin loo isticmaalo
Jenny monge | | Fardo, Tababarka
Dalagga fuulitaanka wuxuu ku socdaa a sixitaanka iyo qalabka isgaarsiinta faraskeenna sidaa darteedna waa inaan ka warqabnaa sida iyo goorta aan u isticmaalno.
Waa a ul dabacsan, oo badanaa lagu daboolo maro ama maqaar taas oo mararka qaar lagu dhameeyo xargaha maqaarka ama fin maqaarka. Waxaa u adeegsada fardooley fardo fuud.
Waan heli karnaa noocyada jeedal kaladuwan iyadoo kuxiran shaqada ama nooca waxqabadka cidda aan dooneyno iyaga.
Ma wax yar ayaan ka ogaannaa qalabkan?
Waxay ka mid noqon karaan qalabka ama qalabka uu fardooleygu ku adeegsado faraska. Waa caawimaad caawiye iyo waliba walxo kale sida reins caawiyaha, spurs ama tie reins.
Waa la isticmaali karaa haddii fuushanuhu fuushan yahay faraska ama uu agtiisa ku dhow yahay.
1.1 Sidee jeedal loo adeegsadaa?
1.2 Talooyin ku saabsan isticmaalka jeedal
2 Noocyada Karbaashka
2.1 Socodka ama jeedal guud
2.2 Jeedal boodaya
2.3 Karbaashka dharka
2.4 Karbaash dhar labis dabiici ah, xargo iyo fuulid ama xeryo fuushan
Qalabkan marka lagu daro u adeegida kici xayawaanka, waxaa loo isticmaalaa sida Kordhinta jirka fardowlaha laftiisa. Sidan ayaa lagu gaari karaa qaybo ka mid ah xubnaha jirka si markaa taabasho fudud faraska fiiro gaar ah jimicsiga socda ama kordhinta xawaaraha. Sidaa darteed waxaa loo adeegsadaa xoojin ahaan.
Waa muhiim in taa laga warqabo looma isticmaali karo ciqaab ahaan marna, laakiin waa caawimaad si loola xiriiro fardaha. Sidaa darteed, waa inaan ka fikirnaa ka hor intaan la adeegsan, sidii aan saadaalinnay bilowga maqaalka. Faraskeennu waa inuu uga jawaabaa kicinta jeedal si xushmad leh, oo aan weligiis cabsi la qabin.
Isticmaalka karbaashka waa in lagu tixgeliyaa waxyaabaha ugu dambeeya ee la isticmaali karo. Ruuxii fuushan waa inuu ogaadaa goorta iyo sida loo isticmaalo tan iyo dalag fuulaya si xun loo isticmaalay had iyo jeer waxay yeelan doontaa saameyn xun faraska.
Sidee jeedal loo adeegsadaa?
Wadaha waa inuu jeedal ku qaado qabashada u daa madaxu inuu wax yar ka baxo gacanta. Waa inaad ku siisaa taabasho gaaban oo sax ah xayawaanka. Waxa caadiga ah waa in la qaato jeedal gacanta gudaha mar haddii ay tahay lugta gudaha oo ilaalinaysa xamaasadda iyo farasku ku fooraro.
Talooyin ku saabsan isticmaalka jeedal
Jeedal inta badan waa la isticmaalaa si loo saxo fardaha yar yar goorma, tusaale ahaan, ma adeecayso calaamadda horay loogu socdo ee lugahayagu tilmaamayaan. Xaaladdaas, taabasho kooban oo qallalan ayaa la siiyaa si uu uga falceliyo uguna feejignaado tilmaamaha aan ku siineyno lugaha.
Joogitaanka kaliya ee jeedal waxay ka dhigi kartaa faraskeena mid feejignaan badan oo adeec badan. Marar badan isticmaalkeeda xayawaanka looma baahna.
Inta lagu jiro fuulista, waxaa la doorbidaa in la isticmaalo codkaaga (ama dhagsii carrabka tusaale ahaan) si aad ugu muujiso xayawaanka inuusan sameynaynin dhaqdhaqaaq ama jimicsi fiican, halkii uu ka isticmaali lahaa jeedal.
In labiska ayaa ka caawiya hagaajinta waxqabadka gadaal, tan waa in loo taabtaa dibigayaga gadaashiisa.
Baaskiilka caadiga ah, fuushanuhu waa inuu yeesho awood uu karbaashka kaga beddelo hal gacan oo gacan kale ah, in kasta oo ay suurtogal tahay in lagu qaado gacanta gudaha ee jimicsiga.
Iyo aad u muhiim ah, marna, Waa inaanan waligeen isticmaalin jeedal haddii aan xanaaqno ama aan samir lahayn.
Waxaa jira karbaashyo dherer iyo qaabab kala duwan ah si ay ula jaan qaadaan baahiyaha edbinta kasta ee fuushan.
Waqtigan xaadirka jeedalku badanaa oo lagu sameeyay maaddada fiberglass-ka, oo ah maaddo khafiifa oo siisa dabacsanaan. Dibadda ugu caansan waa tan nayloon tidcan, in kastoo ay jiraan noocyo badan. Ku gacmaha, tabs iyo tabs ayaa laga samayn karaa maqaar, polyurethane ama caag.
Bal hadda aan aragno noocyada jeedallada jira ee ku saleysan hawsha aan qaban doonno:
Socodka ama jeedal guud
Noocyada jeedal noocan ah, waxaa inta badan jira noocyo iyo midabbo laga kala xusho. Badanaa waa adag laakiin ka dabacsan jaakadaha boodaya. Iyada oo leh cabir dhexdhexaad ah oo u dhexeeya 65 illaa 75 cm, waxay yeelan karaan tabsyo cabbirro kala duwan leh, iyo sidoo kale suunka gacanta si looga fogaado inay lumiso.
Ma yihiin gaaban oo adag, oo leh dherer u dhexeeya 50 iyo 70 cm iyo leh Gacanku wuu ka sii dhumuc weyn yahay kana samaysan yahay waxyaabo aan sibiibix ahayn xajin raaxo leh.
Dhamaadka jeedalku waa cawsduur, oo markuu faraska taabto keenaya buuq sida dhirbaaxada xayawaanka ka dhigaysa inuu falceliyo. Aad ayey u yihiin Faa'iido u leh ilaalinta faraska markaad ka shaqeyneyso wadada.
Jeedal noocan ah waxaa loo isticmaalaa dhinacyada kuruubyada ama dhabarka.
Haddii farasku uusan dhaafi karin caqabad waa in la xusuustaa in jeedalku uusan ahayn qaab ciqaab. Waxaa jira ficillo lagu xallinayo dhibaatooyinkaas iyada oo aan loo baahnayn kuwa wax u dhimaya lamaanaheena. Aad bay muhiim u tahay in xayawaanku nagu kalsoonaado waana wax lagu gaaro shaqada. Hoos u dhig dhererka carqaladda na siinaysa dhibaatooyinka ama ka dhig xayawaanka inuu raaco faras kale.
Way ka dheer yihiin kuwii hore, qiyaastiisu waa 90 ilaa 130 cm. Khafiif ah oo dabacsan tan iyo markii la raadinayo saameyn zimbre ah. Badanaa waxay ku dhammaadaan tuubbo dhuuban oo aad u dhuuban.
Halkii laga qaadi lahaa gacanta sida kuwii hore, tan hoos baa loo qabtaa waxaana la saaraa bowdada fuushan. Intaa oo ay dheer tahay, waxaa loo isticmaalaa xuubka xayawaanka si uu u hoggaamiyo, u saxo, u codsado dhaqdhaqaaq dheeraad ah ama loo yareeyo qallafsanaanta dhaqdhaqaaqiisa. Fikraddu waa awood u isticmaal adigoon sii deynin murqaha oo leh kaliya curcurka curcurka. Taabashadu waa inay ahaataa dhinaca faraska, dibigeenna gadaashiisa, ama xagga dambe.
Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa istaag adoon faraska fuulin, taabashada lugaha xayawaanka.
Karbaash dhar labis dabiici ah, xargo iyo fuulid ama xeryo fuushan
Waxay aad ugu egtahay tii hore, laakiin dheer, qiyaastii 150 iyo 230 cm, tan iyo Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa faraska iyo in laga kaxeeyo meel fog. Tusaale ahaan markay ku dhaawacanto waddo wareegsan oo xayawaanku wareegayo.
Moodooyinka qaarkood sidoo kale waa telescopic si ay u gaaraan dherer ka badan 4 mitir.
Waxay ka kooban yihiin jir adag iyo jeedal ama karbaash ay la socdaan marooji qaade.
Markaad isticmaaleyso jeedalkan qashinka, kuwa gaari kara ilaa 450m ayaa la isticmaalaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » La Fusta, noocyo iyo talooyin loo isticmaalo
Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay inaad ku fuusho faras?